Ny ROI an'ny haino aman-jery sosialy | Martech Zone
Alarobia 1, 2012 Alahady, Septambra 8, 2013 Douglas Karr
Efa nahazo infografika izahay momba ny fomba azo refesina ny media sosialy dia… ary ahoana hay refesina io dia… fa alohan'ny hibosesehanao sy hialanao dia tiako hatolotra anao ity iray ity. Omaly alina dia nifanakalo hevitra momba izany izahay sy i Marty Thompson. Orinasa maro no tsy handroso amin'ny paikadin'ny media sosialy mahery setra noho ny tsy fahampian'ny refy. Mitsambikina ao ny orinasa hafa nefa tsy fantany izay mety ho vokany.
izany infographic avy amin'ny MDGAdvertising dia manao asa tsara amin'ny fanomezana porofo ny tombony azo tsapain-tanana sy tsy azo tsapain-tanana amin'ny media sosialy, ary koa ireo tombony maharitra sy fohy. Ny tena izy dia any afovoany no valiny. Tsy azonao refesina avy hatrany ny fiverenana rehetra, fa hitohy hitombo ny fiverenana maharitra.
Ny psikolojia ny media sosialy